I-china Judah kiln - inqubo yokukhiqiza yamathani ayi-100-day -EPC project nabakhiqizi | UJuda
Ukubaluleka Kokusungula Ubuchwepheshe Obusha Bokushisa Amakhemikhali Besimanje
I-lime yiyona nto esemqoka futhi esemqoka yokusiza ekukhiqizeni insimbi, ukukhiqizwa kwe-calcium carbide, ukukhiqizwa kwe-refractory, ukukhiqizwa kwe-alumina. Ikakhulukazi enkathini entsha, ubuchwepheshe obusha, imikhiqizo emisha iyaqhubeka nokuthuthukisa izinto ze-calcium zisetshenziswa kabanzi. Ukuzijwayeza kufakazele ukuthi ubuchwepheshe besimanje be-lime kiln empeleni buyindawo ebonakalayo futhi enqamulelayo ekhanyayo yamabhizinisi wensimbi nensimbi, amabhizinisi e-calcium carbide, amabhizinisi okupheka nokunye. Njengamanje, inzuzo yethani ngalinye likalamula isidlule kude inzuzo yamathani wensimbi, amathani wensimbi, amathani e-calcium carbide, amathani e-coke. Amabhizinisi asebenzise ubuchwepheshe besimanje besikhumulo semikhumbi iye yahlomula kakhulu, futhi yazuza izinzuzo ezinkulu zenhlalo. Kodwa-ke, amabhizinisi amaningi avinjelwe ukuphathwa kwendabuko kanye nezinga lokuphatha futhi abakaqali ubuchwepheshe besimanje bokukhiqiza i-lime fire namanje bathembele ekukhiqizeni i-lime kiln. Ngakho-ke, uma sifuna ukulawula ngokuphelele ukungcoliswa komlilo womhlabathi, kufanele futhi sithembele ekusetshenzisweni kwesikhumulo samanje selimu ukuxazulula inkinga yokufunwa.
Lokho okubizwa ngokuthi ubuchwepheshe besimanje bobuchwepheshe obusha besimanje kuyinkqubo yesayensi yokubala i-lime ngokuvikela imvelo, umsebenzi wokonga ugesi, imishini kanye nemishini ezisebenzelayo. Ngoba le nqubo isebenzisa ubuchwepheshe besimanje bokushisa obushisayo, ingawasebenzisa ngokugcwele amandla, ikakhulukazi igesi engcolisa imvelo njengomthombo wamandla futhi iphendule imfucuza ibe yingcebo. Lokhu akugcini nje ngokuvikela imvelo, kodwa futhi kukhiqiza i-lime esezingeni eliphansi kanye nezindleko eziphansi. Izinzuzo zayo eziqondile nezingaqondile, izinzuzo zezomnotho nezenhlalo zibukeka kakhulu. Lokhu kungukubaluleka kokwandisa ubhontshisi obusha be-lime technology.
2. Izinhlobo zobuchwepheshe besimanje besikalo sebhaluni
Kukhona ama-kilns ahlanganisiwe ngophethiloli, okungukuthi, uphethiloli oqinile, i-coke, i-coke powder, amalahle negesi. Umshini wegesi uhlanganisa ukuqhuma kwesithando somlilo, igesi ye-coke oven, igesi ye-calcium carbide yomsila, igesi lesithando somlilo, igesi yemvelo njalonjalo. Ngokwakheka komlilo, kunendawo yokushisa shaft, i-rotary fire, i-sleeve fire, i-Vimast fire (i-West Germany), i-Melz fire (i-Switzerland), i-Fucas fire (i-Italy) njalonjalo. Ngasikhathi sinye, kukhona isibani sokusebenza kwengcindezi esihle kanye nesitofu sokusebenza kwengcindezi esibi. Isikhuni samanje esihlanganisiwe esinama-cubic metres ayi-800 ngosuku siphume ngaphansi kuka-500 nesitofu segesi sesimanje esinama-cubic metres ayi-250, ikakhulukazi ukonga amandla kanye nokuvikelwa kwemvelo ikhandlela le-lime ngomlilo wegesi lomlilo kanye ne-coke oven gas combustion, okwenziwe nokwakhiwa. Ukuklanywa nokwakhiwa kwe- “lime kiln long flame burner” kuxazulule inkinga evuthayo yenani eliphezulu lamakhalori kanye nelangabi elifushane legesi ka-coke oveni, engasebenzisa ngokugcwele igesi ye-coke oven esele. Kusuka kugesi wokuqala we-coke oven "ukukhanyisa", kungcolisa imvelo ibe amandla abalulekile amabhizinisi ukudala izinzuzo. Kumabhizinisi amancane naphakathi nensimbi nensimbi, amabhizinisi okupheka, amabhizinisi e-calcium carbide, kanye nomkhakha we-refractory kuhle kakhulu ukonga amandla, ukuvikelwa kwemvelo, ukusebenza kahle nezindlela eziphumelelayo.
3.IMIGOMO ESISEKELO NENQUBO YOBUCHWEPHESHE
Ingxenye eyinhloko ye-limestone yi-calcium carbonate, kuyilapho ingxenye eyinhloko ye-lime i-calcium oxide. Umgomo oyisisekelo wokushisa i-lime ukubola i-calcium carbonate nge-limestone ku-quicklime ye-calcium oxide ne-carbon dioxide ngosizo lokushisa okuphezulu. Ifomula yayo yokusabela ithi
Inqubo yawo ukuthi i-limestone nophethiloli kufudunyezwa kusetshenziswa ama-kilns e-lime (uma amapayipi kaphethiloli wegesi kanye nezibaseli kufakwa) bese kukhishwa idizayini ngamadigri ayi-850, kubalwa ngo-1200 degrees, bese kupholiswa bese kukhishwa emlilweni. Inqubo yayo ephelele yokubala ilingana nokwenziwa esitsheni esivaliwe. Izinhlobo ezahlukahlukene zomlilo zinezindlela ezahlukahlukene zokushisa kuqala, zokubala, zokupholisa nezokuthulula umlotha. Kodwa-ke, eminye imigomo yenqubo iyefana: izinga lokushisa kwe-calcination lingama-850-1200 degrees, ukushisa kokushisa kungu-100—850 degrees. Ukushisa komlotha kungaphansi kwama-degree ayi-100. Ikhwalithi yempahla eluhlaza ingaphezulu, ikhwalithi ye-lime yinhle; inani lama-calorific aphezulu liphezulu, ukusetshenziswa kwenani lincane; usayizi wezinhlayiyana ze-limestone ulingana nesikhathi sokubala; idigri yomsebenzi we-quicklime ilingana ngokuhlukile nesikhathi sokubalwa kanye nezinga lokushisa lokubala.
Langaphambilini UJuda uvutha amathani angama-300 / ngosuku ama-X4 Lime kilns eLuoyang, kuphrojekthi yeHenan Province-EPC
Olandelayo: I-Lime Kiln Production Line Assembly
Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide, Izinsiza kusebenza zeCalcium Hydroxide Production Line, Ukwenza i-Calcium Hydroxide, Ukwenza I-calcium Hydroxide, Calcium oxide Futhi Calcium Hydroxide, Igama Lwebhizinisi LeCalcium oxide,